Amanqaku kaTerry Ziegler kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UTerry Ziegler
UTerry Ziegler ngu-CEO kunye noMsunguli we-Co Isisombululo seT-Pro. Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava olawulo lwempahla (CPG) kwimimandla yentengiso yorhwebo, intengiso yabathengi, ulawulo lwecandelo, ukuthengisa kunye nemali kubunkokheli nakwindima yolawulo e-RJR / Nabisco, eBorden Foods, kwiFama yeFama yaseMelika, kwiQela lokuHlanganisa kunye Iitekhnoloji ze-AFS; UTerry udibanisa usetyenziso kunye nobunkokeli obusebenzayo.
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 21, 2017 NgeCawa, ngo-Epreli 23, 2017 UTerry Ziegler
Icandelo leMpahla yabaThengi yindawo apho utyalo-mali olukhulu kunye nokuguquguquka okuphezulu kuhlala kukhokelela kutshintsho olukhulu egameni lokusebenza kunye nenzuzo. Amashishini amakhulu anje nge Unilever, Coca-Cola, kunye no Nestle kutshanje babhengeze uhlengahlengiso kunye nokwenza isicwangciso-qhinga sokukhuthaza ukukhula kunye neendleko zokonga, ngelixa abavelisi beempahla ezincinci zabathengi benconywa njengabadala, abahlaziyi beqela abenza impumelelo kunye nokufumana ingqalelo. Ngenxa yoko, utyalomali kwizicwangciso zolawulo lwengeniso ezinokuchaphazela umgca osezantsi